Lama rakibi karo KEDW Edwards photoreal
Lama rakibi karo KEDW Edwards photoreal bilood 8 19 hours ago #1541
1 tijaabadii ugu dambeysay ee rakibida ayaa dhamaatay kadib 87% farriinta:
"C: \_ adeegsadayaasha 'Ernst \_ Dokumentiyada \_ Rikoooo Add-ons Saldhigga Ciidanka Cirka Edwards ee KEDW Photoreal
Cillad 2 inta la sameynayo faylkaan: Nidaamka 'Das System kann die angegebne' dataei nicht finden
Rakibaadda waa la joojinayaa "
2nd maxkamadi waxay dhamaatay kadib 88%:
Qaabeynta nidaamku wuu fashilmay
Isku day si otomaatig ah iyo rakibaad gacanta ah.
Waxaan isticmaalayaa Windows 10 Xirfadle iyo P3Dv4.5HF2
Waad ku mahadsan tahay caawimaad kasta
Lama rakibi karo KEDW Edwards photoreal bilood 8 19 hours ago #1542
Sidaad arki karto, waxbaa horjoogsanaya abuurista galka Edward Air Force Base KEDW Photoreal ee kujira Dukumintigaaga, galkaan ayaa muhiim ah maxaa yeelay wuxuu ka koobanyahay buuga gacanta iyo akhrinta.
Qiyaasta aniga ayaa ah in barnaamijkaaga antivirus uu horjoogsanayo abuurista faylka, waxaan isla arinta ku lahaa Bitdefender. Si fudud ha u daciifin Dukumiintigeyga qoraalka.
Nala soo socodsii haddii tani wax kuu qabanayso
Lama rakibi karo KEDW Edwards photoreal bilood 8 12 hours ago #1543
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada degdegga ah iyo tan ugu waxtarka badan!
Deacsi Difaaca ayaa u xaliyay dhibaatadayda rakibida.